Sidee inuu ka soo kabsado iPhone Data ka dib markii macruufka 6 Update shil
> Resource > macruufka > Sidee soo celinta iPhone Data ka dib markii macruufka 6 Update shil
Waxaan kuu soo celin karaa iPhone Data Khasaaray ka dib markii macruufka 6 Update shil?
Saaxiib A ee anigaa go'aansaday inaad cusboonaysiiso uu iPhone in macruufka 6 shalay. Casriyayn waxay ahayd ku dhawaad ​​guul laakiin waxa ay ku burburtay dhamaadka. Waxa uu ganacsade ah, si uu cabsan inuu ayaa laga badiyay laga yaabaa in dhammaan ballamada in taariikheed ee telefoonka ee. Waxa uu aanad hubin waxa la xoojiyaa si ay u Lugood. ------- Shirley
Tani waa mid ka mid ah dadka isticmaala oo la kulmeen macruufka dhibaato shil 6 update kaliya. Marka si guul updated ay macruufka 6 ay qalab ee dhamaadka, qaar ka mid ah u dhawraan files ay telefoonka nasiib wanaag. Laakiin nasiib darro, waxaa weli jira xaddi weyn oo ah dadka isticmaala oo files laga badiyay ka dib shilka, oo iyagu ma ay yaqaaniin sida inuu ka soo kabsado xogta iPhone ka dib markii update shil.
Daacadnimadii, ilaa iyo inta ay jirto Lugood gurmad ku computer, inay weli soo celin karaa xogta iPhone ka dib markii macruufka 6 update. Dhammaan waxay u baahan yihiin waa iPhone Data Recovery Tool.
Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iphone Mac Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Windows) waa aalad fudud laakiin wax ku ool ah si ay u xaliyaan dhibaatadan. By soo saarida gurmad Lugood, waxaa soo kabanayo files ka macruufka qalabka aad si fudud: photos, xiriirada, jadwalka taariikhda, qoraalada, fariimaha oo dheeraad ah.
Download version maxkamadda sida raaco, iyo faylasha aad noqon doonto dib u daqiiqo.
Laba Talaabooyinka inuu ka soo kabsado Data in lumay ka dib markii shil macruufka 6 Casriyaynta
Tallaabada 1. nstall iyo abuurtaan barnaamijka, waxaad arki doontaa interface ah, oo ay ku jiraan oo dhan gurmad Lugood ee qalabka kala duwan ee aad PC. Dooro gurmad qalab iyo ku dhacay oo ku button Start Scan.
Tallaabada 2. iskaanka ayaa waxay qaadataa dhowr ilbiriqsi. Sida araggiisa dabagal, waxaad ka arki kartaa files in gurmad soo bandhigay qaybaha kala duwan, oo aad awoodo inaad ku eegaan faahfaahin iyaga ka mid ah adigoo kala duwan.
Hubi aad rabto in aad wax kasta files si loo soo celiyo ka dibna riix bogsadaan. Waxaad iyaga ku badbaadin karaan on your computer.
Fiiro gaar ah: Tan iyo markii gurmad Lugood waa badan-qoraal ah mar kasta oo aad qalab macruufka hagaagsan oo Lugood, waxaanu kuu soo jeedinaynaa in aadan u hagaagsan qalab la Lugood marka laga helay xogta laga badiyay ka qalab aad.